I-Apple isungula i-beta yesibini ye-macOS 12.2 yabaphuhlisi | Ndisuka mac
I-Apple ikhupha i-beta yesibini ye-macOS 12.2 yabaphuhlisi
Abaphuhlisi bokwakha iiapps zeApple sele benenguqulelo entsha yeMacOS Monterey yokuzama. Imalunga ne I-beta yesibini ye-macOS 12.2, inkampani esandula ukuyikhulula kubo bonke abo badwelisi benkqubo abayifunayo.
Njengoko kuhlala kunjalo kuzo zonke iinguqulelo ze-beta ze-macOS, abaphuhlisi abagunyazisiweyo be-Apple banokukhuphela ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yomphuhlisi we-Apple okanye nge-OTA ukuba sele benayo inguqulo ye-beta ye-MacOS Monterey efakwe kwi-Mac yabo. Bonke abanye abasebenzisi, kuya kufuneka Yima.
Kwiiveki ezintathu ezidlulileyo i-Apple ikhuphe i-beta yokuqala ye-macOS 12.2 kwaye kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ikhuphe i-beta yesibini. Olu guqulelo lwe IMacOS Monterey yongeza usetyenziso lomculo olutsha kunye nophuculo kwiSafari kwiziboniso zeProMotion njengeMacBook Pro.
Le beta entsha inenani le ukwakha i-21D5039d. Ngoku iyafumaneka ukukhuphela kwi webhsayithi ukusuka kuApple kubaphuhlisi. Inokukhutshelwa kwakhona nge-OTA, ukuba iMac yomphuhlisi sele ine-beta ye-macOS Monterey efakiweyo.
Sele kwi-beta yokuqala ye-macOS 12.2 ezinye izinto ezintsha zinokubonwa. Ibandakanya isicelo esitsha sasekhaya se Apple Music, ikhawuleza kwaye igudileyo kunenguqulo yangaphambili, ekhangeleka ngakumbi njengephepha lewebhu.
Enye into entsha esinokuyibona kwi-macOS 12.2 beta 1 luphuculo olukhulu ekuskrolweni kwesikrini kwiSafari enezikrini. I-ProMotion, njengeMacBook Pro.
Eyona nto isengqiqweni kukuba le beta yesibini entsha kukulungisa iimpazamo ezifunyenwe kweyokuqala, kwaye ayiboneleli naziphi na iindaba ezibalulekileyo kumsebenzisi.
Njengoko sihlala sisenza ukusuka apha, sicebisa ukuba Sukufakela naluphi na uhlobo lwebeta yeMacOS kwiMac yakho, nokuba uyisebenzisela umsebenzi okanye isikolo. Abaphuhlisi bane-Macs ethile yokwenza iimvavanyo ezinjalo, ezingenalo idatha ebalulekileyo. Ukuba ngenxa yempazamo ethile kwi-beta isixhobo siyawa, basibuyisela kwaye baqale phantsi, ngaphandle kwengxaki. Ngaba yingozi emsebenzini. Ukuba oko kwenzeka kuwe, ewe uyakuba nengxaki...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » IMacOS Monterey » I-Apple ikhupha i-beta yesibini ye-macOS 12.2 yabaphuhlisi
I-Apple yenza uthethathethwano ngo-2020 nomenzi wezixhobo zemoto zaseJapan